Augmented Reality သည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သနည်း။ | Martech Zone
Augmented Reality သည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သနည်း။
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 15, 2020 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 18, 2021 Elma Beganovich
COVID-19 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေး ၀ ယ်နည်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အပြင်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်စားသုံးသူတွေဟာအွန်လိုင်းမှာနေဖို့နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအွန်လိုင်းမှာ ၀ ယ်ဖို့ရွေးချယ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူတွေဟာ lipstick ကိုသုံးတာကနေအနှစ်သက်ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းအထိဘာတွေဘယ်လိုဗီဒီယိုကို ၀ ယ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသြဇာသက်ရောက်စေမယ့်အကြောင်းတွေပိုပိုများလာတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ၏လွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်နှင့်စျေးနှုန်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီကလေ့လာမှု.
သို့သော်ဤအရာသည်ယုံကြည်ရန်မြင်ရန်လိုအပ်သောအရာများအတွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ In-store တွင်သင်ရွေးချယ်ခဲ့သောနှုတ်ခမ်းနီများကိုဝယ်ယူခြင်းသည်၎င်းကိုမမြင်ရသည့်အရာမှမှာယူခြင်းနှင့်ဝေးကွာသည်။ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်မည်သို့ကြည့်မည်နည်း။ ယခုတွင်အဖြေရှာတွေ့ပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ စစ်မှန်သောနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပြသနေသည်။
ယခုငါတို့အားလုံးမြင်ကြပြီ တိုးချဲ့အဖြစ်မှန် (AR) အချို့သောပုံစံ၌။ သြစတြေးလျသည်သူတို့၏ရုပ်ပုံများကိုဗွီဒီယိုများကိုဝေမျှနေသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခွေးတစ်ကောင်၏နားရွက်များနှင့်နှာခေါင်းများသို့မဟုတ်သူတို့မျက်နှာများပေါ်တွင်အသက်အရွယ်စစ်ထုတ်ခြင်းများကိုဝေမျှနေကြောင်းသင်သတိပြုမိနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကလူတိုင်းသည်မြို့တစ်မြို့လုံးရှိ Pokemon ဇာတ်ကောင်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရန်လူတိုင်းသည်သူတို့၏ဖုန်းများကိုအသုံးပြုနေချိန်တွင်သင်မှတ်မိနိုင်သည်။ ဒါ AR ပဲ။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာဖြင့်ပုံရိပ်ယူပြီးသင်၏ဖုန်းပေါ်သို့တင်လိုက်ခြင်းဖြင့် Pikachu သည်သင့်ရှေ့တွင်မတ်တပ်ရပ်နေသည်သို့မဟုတ်သင်၏မျက်နှာပေါ်ရှိပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ AR သည်ဖျော်ဖြေရေးတန်ဖိုးကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လူကြိုက်များသည်။ သို့သော်အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုလောကတွင်အလားအလာများစွာရှိသည်။ သင့်အိပ်ရာပေါ်မှမထလာဘဲသင်၏နှုတ်ခမ်းနီပေါ်ရှိနှုတ်ခမ်းနီကိုသင်မြင်နိုင်လျှင်ကော။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုမရောက်ရှိမီသင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်လုံခြုံမှုမှကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်များကိုစမ်းသပ်ကြည့်နိုင်လျှင်ကော။ AR နှင့်အတူသင်ထိုအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်ဤနည်းပညာကိုခုန်ကျော်နေကြသည်။ မိတ်ကပ်မှသည်လက်သည်းဆိုးဆေးအထိဖိနပ်အထိစျေးကွက်သမားများသည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းပညာကိုအသုံးချရန်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းသစ်များကိုရှာဖွေနေကြသည်။ အဲဒီချစ်စရာခွေးနားရွက်တွေအစားမျက်မှန်နှစ်စုံဒါမှမဟုတ်တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ သင့်ခေါင်းပေါ်ပေါ်သက်ရောက်နေသောသက်တံ့ရောင်များနှင့်တိမ်များအစားအရွယ်အစားအတွက်ဆံပင်အရောင်သစ်ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ သငျသညျကို virtual စနီကာတရံအတွက်လမ်းလျှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ပုံရိပ်တွေကတစ်ချိန်လုံးပိုပြီးလက်တွေ့ကျလာတယ်။
Virtual Try-ons များ
ဤလမ်းကြောင်းသစ်ကိုခေါ်ဝေါ်သော virtual စမ်းသုံးမှုများသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးပျမ်းမျှစားသုံးသူအတွက်အနည်းငယ်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူသန်း ၅၀ သည် ၂၀၂၀ တွင် AR ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာအားလုံးတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သနည်း။ စတင်ရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းကြည့်မှုများသည်ဖက်ရှင်နှင့်အလှအပလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောသူများထံရောက်ရှိပြီးစားသုံးသူများကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်အက်ပလီကေးရှင်းများသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကစားရန်တွန်းအားပေးသည်။ AR နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသေးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာသြဇာသက်ရောက်သူများသည်သူတို့၏နောက်လိုက်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်စမ်းသပ်ရန်စေလွှတ်ခြင်းကြောင့်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။
AR နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှသြဇာသက်ရောက်သူများသည်၎င်းတို့မည်သို့ကြည့်ရှုမည်ကိုပြသရန်အ ၀ တ်အထည်တစ်ခုပင်ပိုင်ဆိုင်စရာမလိုတော့ပေ။ လွှမ်းမိုးသော virtual ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲများအတွက်သြဇာရှိသူများပူးပေါင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကြီးမားသောအွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအုပ်စုတစ်စု၏အယူအဆတွင်ဖန်တီးနိုင်သည် ကြိုးစားနေသည် ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးတွင်သူတို့မည်သို့ပေါ်လာမည်ကိုပြသရန်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အားလုံးသည် living ည့်ခန်းမှထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိဘဲစီစဉ်နိုင်သည်။
သို့သော်ဖက်ရှင်နှင့်အလှအပစမ်းသပ်မှုများသည် AR အတွက်တစ်ခုတည်းသောအသုံးပြုမှုမဟုတ်ပါ။ အားကောင်းသော demo tool တစ်ခုအနေဖြင့် AR သည်ဗီဒီယိုမှကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုပြသရန်သြဇာသက်ရောက်သူများအတွက်အဖြေဖြစ်သည်။ ဒါကဆံကေသာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောဂိမ်းလုပ်ငန်းကဲ့သို့သောနယ်ပယ်များအထိကျယ်ပြန့်လာနိုင်သည်။ အိမ်သူအိမ်သားလုပ်ငန်း၌ IKEA သည် IKEA Place ဟုခေါ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုစတင်သည်။ ၎င်းသည်ဝယ်သူများမဝယ်ခင်၊ အိမ်များကိုသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူတကွစုစည်းရန်ကြိုးပမ်းခြင်းများမပြုလုပ်မီသူတို့၏အိမ်များရှိပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းများကိုစမ်းသပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သူတို့၏အိမ်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စားပွဲအသစ်တွင်သူတို့၏ထမင်းစားခန်းတွင်မည်သည့်စားပွဲသစ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းအားမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုပြသသည့်အွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်များကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်နေရာအများကြီးရှိတယ်၊ နည်းပညာပွင့်တယ်။
နောက်လိုက်များသည်အမျိုးအစားအသစ်များကိုတပ်မက်လာသည်နှင့်အမျှ Youtube သည်လွှမ်းမိုးသူများထံမှဗွီဒီယိုများနှင့်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်ကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူသန်း ၃၀ ကျော်၏ Youtube တွင်တစ်နေ့လျှင်ဗီဒီယို ၅ ဘီလီယံနီးပါးကြည့်ရှုသည်။ AR သည်ပုံစံအပေါ်တွင်အခြေခံအားဖြင့်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်မျိုးဆက်ကြော်ငြာများဖြစ်သည်။ AR အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပညာရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာသင်ယူခြင်းကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာအသုံးချပရိုဂရမ်များသို့စျေးကွက်တင်ခြင်းကို ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှနည်းပညာသည်သာပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ မကြာမီကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်၎င်းကိုအသုံးချပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သူတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ အကျိုးရှိလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ x အမှတ်တံဆိပ်ကိုနောက်အဆင့်သို့မည်သို့တိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်းသြဇာသက်ရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် AR အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှလူတစ် ဦး သည် ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
A & E အကြီးဆုံးသောဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည် client ကိုအစုစု Wells Fargo၊ J&J၊ P&G နှင့် Netflix စသည့် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူများဖြစ်ကြသော Amra နှင့် Elma တို့သည်လူမှုရေးနောက်လိုက် ၂.၂ သန်းကျော်ဖြင့်ကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးသူများဖြစ်သည်။ A&E အကြောင်းပိုမိုကြည့်ပါ Forbes မဂ္ဂဇင်း, Bloomberg ရုပ်မြင်သံကြား, Financial Times, Inc ကနှင့် Business Insider ဗီဒီယို.
Tags:a& eAmra နှင့် Elmaarလုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်လှပမှုပုံikea နေရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလွှမ်းမိုး try-onကို virtual try-onကို virtual try-ons တွေကိုyoutube က
မစ္စ Beganovich ဦး ဆောင်သည် A & Eကမ္ဘာကျော်မိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များစာရင်းပြုစုရန်အားထုတ်မှု။ သူမ၏ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးအတွက် A&E ၏အခန်းကဏ္identifyingကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထိုမိတ်ဖက်များ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်နယ်ပယ်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
အောင်မြင်သော ၂၀၂၀ အားလပ်ရက်ရာသီအတွက်သင်၏အမှတ်တံဆိပ် Playbook